နောက်ဆုံးသောကာလရှိ မပြောင်းလဲသောအသင်းတော်ဝင်များ | Unconverted Church Members in the Last Days | Real Conversion
(၂ပေ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာ-၅)
မေလ ( ၃၁ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"သို့သော်လည်း၊ ယုဒလူတို့တွင် မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိကြ၏။ ထို နည်းတူ ဖျက်ဆီးတတ်သော မိိိိိိိိစ္ဆာဒိဌိအယူများကို ပရိယာယ် အားဖြင့်သွင်း၍၊ မိမိတို့ကို ဝယ်တော်မူသောအရှင်ကို ငြင်း ပယ်လျက်၊ မိမိတို့အပေါ်သို့ လျှင်စွာသောဖျက်ဆီးခြင်းကို ရောက်စေသော မိစ္ဆာဆရာတို့သည် သင်တို့တွင် ရှိကြလိမ့် မည်။" ( ၂ပေ ၂း ၁ )
တမန်တော်က မှားယွင်းသောဆရာများသည် အသင်းတော်များတွင် "သင်တို့ကြား၌" ရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချက်မှာ ယနေ့တွင် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
"အကြောင်းမူကား၊ နောင်ကာလ၌ လူတို့သည် စင်ကြယ်သောသြ ၀ါဒကို နာမခံနိူင်ဘဲ၊ ယားတတ်သောနားရှိလျှင်၊ မိမိတပ်မက်ခြင်း အတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်။" (၂တိမောသေ ၄း ၃)
လူတို့သည် သူတို့၏နားကိုယားစေသောအရာတစုံတရာကို နားထောင်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် မှားယွင်းသောဆရာများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ခေတ်စားနေကြသည်။ ယနေ့ရုပ်မြင်သံကြား ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသောဆရာများမှာ ဤအတန်းအစားအားလုံးတွင် ရှိကြသည်။ သူတို့သည် အလွန်ဆိုးရွားသည့် မှားယွင်းသောသြဝါဒများကိုဆောင်ယူလာကြသည်။
၂ပေတရုအခန်းကြီးနှစ်က ဤမှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိသူများအကြောင်းကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။ တမန်တော်က သူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုပင်ငြင်းပယ်လျက် "အလွန်ဆိုးသွင်း သည့်မှားယွင်းမှုများအကြောင်းကို" သင်ကြားပေးကြပါသည်။ သူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအ ကြောင်းဟောကြားခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် ယေရှုကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ သူတို့သည် အင်တီနိူမီ အယူဝါဒရှိသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ခရစ်ယာန်များဖြစ်လင့်ကစား အပြစ်ထဲတွင် အသက် ရှင်နိူင်သေးကြောင်း သူတို့ကိုသွန်သင်ပေးပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထက် ငွေအတွက် သာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့အပေါ်ကျရောက်မည့်တရားစီရင်ခြင်းသည် ပြင်းထန်နေပေ လိမ့်မည်။ ထကြွပုန်ကန်သော ကောင်းကင်တမန်များကို"ငရဲသို့ပစ်ချသကဲ့သို့" သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရကြပေမည်။ နောဧခေတ်ကလူများကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် တရားစီရင် သကဲ့သို့ သူတို့ကို စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့တို့ကို မီးအားဖြင့်စီရင်သကဲ့သို့ သူတို့ကို စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။
ထိုပုံဥပမာသုံးခုဖြင့် ရှင်ပေတရုက မှားယွင်းသောဆရာများနှင့်သူ့နောက်လိုက်သော သူများကို တရားစီရင်တော်မူမည်အကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။ မှားယွင်းသောသူများက ခရစ်ယာန်များသည် အပြစ်ထဲတွင်ရှိနိူင်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိူင်သေးသည်ဟု ဆိုကြ ပါသည်။ သူတို့သည် မောက်မာပြီး နှုတ်ကျယ်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ၏မကောင်းကြောင်းကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောကြပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာ၏အခွင့်အာဏာကို ဖီဆန်ငြင်းဆန်ကြသည်။ ဤမှားယွင်းသောသူများသည် ၄င်းတို့ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာများကို မသိကြပေ။ သူတို့သည် အပြစ်၏ကျေးကျွန်များ ဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်၌ သေကြေပျက်စီးကြပေလိမ့်မည်။ သူတို့သည် သူတို့သည် အသင်းတော် တွင် "အစွန်းအထင်း" နှင့် "သိက္ခာကျစေသည့်အကြောင်းတရားများ" ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့၏ မျက်စိသည် တပ်မက်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်လျှံလျက်ရှိသည်။ အပြစ်ပြုခြင်းကို မရပ်တန့်နိူင်ကြပေ။ သူတို့က မတည်ငြိမ်သောလူများကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းပါသည်။ သူတို့ကို ကြိမ်ဆဲကြပါ သည်။ သူတို့သည် ငွေကြေးအတွက်ဟောပြောမှုတွေပြုသော ဗာလာမ်ကဲ့သို့ မှားယွင်းသော ပရောဖက်ပင်ဖြစ်ကြသည်။
ဤမှားယွင်းသောခရစ်ယာန်များသည် ရေမရှိသည့် ခြောက်သွေ့သောရေတွင်းနှင့် တူကြပါသည်။ သူတို့သည် အပြောကောင်းကြသော်လည်း နောက်လိုက်များကို လိမ်လည် လှည့်ဖြားကြပါသည်။ သူတို့နောက်လိုက်များအား လွတ်လပ်မှုကို ဂတိပေးထားကြသည်။ သို့ သော် သူတို့ကိုတိုင်သည်ပင် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သည့် တပ်မက်သောစိတ်တွင် အချုပ်ခံနေရသူ ပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆိုးသွင်းခြင်း၏ ကျေးကျွန်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က ယုံကြည်သူအ သစ်များကို မှားယွင်းသောနေရာသို့လမ်းပြခဲ့သည်။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ပညတ်ချက် အတိုင်းမလိုက်လျောက်ကြသောကြောင့် စီရင်ခြင်းကို ခံရကြပေမည်။ သူတို့သည် ခွေးများ၊ ဝတ်များနှင့်တူကြပေသည်။ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်ကောင်းများအဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားကြသော် လည်း အပြစ်ဟောင်းထဲသို့ ပြန်သွားလေ့ရှိကြပါသည်။ သူတို့သည် ခွေးများ၊ ဝတ်များကဲ့သို့ပင် သူတို့၏သဘာဝများသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြပါသည်။ ၄င်းမှာ ၂ပေတရု ဒုတိယစာစောင်က ကျွနု်ပ်တို့အားပြောဆိုနေသည့်အရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပေတရုက ဤမှားယွင်းသောခရစ်ယာန်များအကြောင်းပြောကြားရာတွင် တစ်ခန်းလုံး ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုပါသနည်း။ ပထမအချက်မှာ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသ မိုင်းကြောင်းတလျှောက်တွင် တည်ရှိခဲ့ပြီး ကျွနု်ပ်တို့အား သတိပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်မှာ သူတို့သည် များပြားလာကြပြီး နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ပြင်းထန်နေကြသည်။ ၂ပေ ၃း၃ ကိုကြည့်ရှုပါ။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာဖတ်ရှုကြပါစို့။
"ရှေးဦးစွာသိမှတ်အပ်သောအရာဟူမူကား၊ နောက်ဆုံးသောကာလ ၌ ပြက်ယာယ်ပြုတတ်သောသူတို့သည် မိမိတို့တပ်မက်ခြင်းအလို အတိုင်း ကျင့်နေ၍….၊" ( ၂ပေ ၃း ၃ )
အားလုံးထိုင်နိူင်ပါသည်။ "နောက်ဆုံးသောနေ့တွင်" ဟူသော ၄င်း၏စကားကို မှတ်သားထားပါ။ ထိုလိမ်လည်လှည့်စားထားသူများသည် အခန်းနှစ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ဖတ်ရှုခဲ့ကြရသည့် မှားယွင်း သောခရစ်ယာန်များနှင့်တူကြပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ရှီကြ သည့်မှားယွင်းသောခရစ်ယာန်များနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပြောစရာများစွာရှိပါသည်။ သူတို့သည် အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်တွင် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်ကြသော်လည်း အတွင်းစိတ်နှလုံးတွင် မူ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးမရှိပေ။ ( ၂တိ ၃း ၅ ) "နောင်ကာလ၌ [လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ် ၀ိညာဉ် တို့၌၄င်း၊ [နတ်ဘုရား]တို့နှင့်စပ်ဆိုင်သောသြဝါဒတို့၌၄င်း မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။" (၁တိ ၄း ၁ ) လောကကြီးသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် သွားသည့်အချိန်တွင် အသင်း တော်များကို "နတ်ဆိုးများတည်နေရာ၊ မှားယွင်းသောစိတ်ဝိညာဉ်များဆုတ်ကိုင်ထားကြခြင်း၊ မသန့်ရှင်း၊ မုန်းတီးဖွယ်ရာငှက်မျိုးများတည်နေရာလှောင်အိမ် ( ဗျာ ၁၈း ၂ ) အဖြစ်ဖော်ပြထား ပါသည်။ အသင်းတော်ကို ဤအချက်တွင် "ပြည့်တန်ဆာကြီး" ဟုခေါ်သည်။ (ဗျာ ၁ရး ၁၊ ၁၉း ၂) ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က "ပြည့်တန်ဆာကြီး" မှာ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ပိုင်ရှင် အဖြစ်အားကိုးယုံကြည်ထားခြင်းမရှိသောသူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၅၊ Thomas Nelson Publishers, ၁၉၈၃၊ စာ-၁၀၃၀၊ ဗျာဒိတ် ၁ရး ၁ မှတ်စု )
Dallas Theological Seminary တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်းအုပ်လုပ်ခဲ့သည့် Dr. John F. Walvoord က "သမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်ဆိုမှုတွင် ယေရှုခရစ်နှင့်၄င်း၏လုပ်ဆောင် ချက်ကို ငြင်းဆန်သောသူသည် ခရစ်ယာန်လုံးဝမဟုတ်ပါ" ဟုဆိုသည်။ သူသည် ခရစ်ယာန် ကိုဆန့်ကျင်သောသူသာဖြစ်သည်။ သူသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဆန့်ကျင်သူ၊ မှားယွင်းသော အယူရှိသူ၊ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ထိတွေ့ခြင်းမခံရ သောသူပင်ဖြစ်သည်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်းတစ်ခုမှာ ပေတရုကြိုတင်ဟောပြောသောအရာ သည် ယနေ့အသင်းတော်တွင် သိသာထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အသင်းတော်တွင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံသောမယုံကြည်သူတို့၏ ပမာဏနှင့်နက်နဲမှုကို သတိမပြုမိကြပေ။ ပေတရုက ဤသည်ကို လွန်ခဲ့သည့်အချိန်များစွာက ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ၄င်း၏ပြည့် စုံလာမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေရန်မလိုအပ်ပေ။ ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ (John F. Walvoord, Th.D., ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်နှစ်ခုနှစ်ဆယ်တွင် "ခေတ်သစ်အသင်းတော်သွားနေ သောအရပ်"၊ Charles L. Feinberg, Th.D., Ph.D.၊ အယ်ဒီတာ၊ Moody Press ၊ ၁၉၇၁၊ စာ- ၁၁၃၊ ၁၁၄ )
မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ကျွနု်ပ်ပြောနိူင်သည်မှာ များစွာသော ဧဝံဂေလိအသင်းတော် များစွာတို့သည် "ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသဖြင့် " Dr. Walvoord ပြော ဆိုသကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်းမရကြပေ" ဟုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျမ်းစာကျောင်းများနှင့် ကျွနု်ပ်တို့အသင်းသားဖြစ်ခြင်းများတွင် မှန်ကန်လျက်ရှိပါသည်။ ဒေါက်တာ Walvoord ပြောဆို သကဲ့သို့ပင် ''ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အသင်းတော်တွင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံသောမယုံကြည်သူတို့၏ ပမာဏနှင့်နက်နဲမှုကို သတိမပြုမိကြပေ"
ကျွနု်ပ်မေးလိုသောမေးခွန်းမှာ ထိုသို့ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေသည် အဘယ့် ကြောင့်ဖြစ်ပျက်လာသနည်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးရှာတွေ့သောအဖြေမှာ ဖြစ်ပျက် ခဲ့သောအရာကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုသုံးသပ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၁ဂ၂၄ခုနှစ်၊ ဆယ့်ကိုးရာစုမှစတင် လျက် Charles G. Finney သည် ပြောင်းလဲခြင်းကို လျှင်မြန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော "ဆုံးဖြတ် ချက်" တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
ခေတ်သစ်"ဆုံးဖြတ်ချက်များ" လွဲမှားနေသောအရာမှာ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က "John Bunyan က သူသည် အပြစ်ကိုသိမြင် ခြင်းတွင် ကျေးဇူးတော်လွှမ်းခြုံထားပြီး စိတ်ဝိညာဉ်သည် ဆယ့်ရှစ်လလောက်ဝမ်းနည်းငိုကြွေး ခဲ့ရကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အချိန်ကာလသည် သိပ်အရေးမကြီးလှပါ။ နိူးထလာပြီး အပြစ်ကိုသိ မြင်လာသောသူသည် ဤအကြောင်းအရာတွင် ဒုက္ခရှိရမည်။ သူသည် အဘယ်သို့သေဆုံးပြီး ဘုရားသခင်ကို ဖူးတွေ့နိူင်မည်နည်း" ဟုဆိုထားပါသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., သေချာမှု (ရောမ ၅ ) ၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၇၁၊ စာ-၁၈ ).
လွန်ခဲ့သည့်သောကြာနေ့က John Bunyan ၏ ခရီးသွားဖြစ်စဉ် အကြောင်းကို ဖတ်ရှု ခဲ့ပါသည်။ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သူပြောဆိုခဲ့ သောအရာမှာ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်အလုံးနီးပါး၏ယေဘုယျယုံကြည်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြော ဆိုသည့် Finney မတိုင်မှီ အသုံးများသောစကားဖြစ်သည်။ ခရီးသွားဖြစ်စဉ် မှာ George Whitefield အတွက် ပုံနှိပ်ပြီး အင်္ဂလန်နှင့် အမေရိကန်ရှိ ကယ်လ်ဗင်းမက်ဒသစ်အသင်းတော် များတွင် ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဂျွန်ဝယ်စလီအ တွက်ပုံနှိပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့်နိုင်ငံတစ်လျှောက်ရှိ ဝယ်စလီယန်မက်ဒသစ်အသင်း တော်များတွင် ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို ပရိုတဲ့တင်းအသင်းတော်ရှိ ထောင် ပေါင်းများစွာသောလူတို့က ဖတ်ရှုကြပြီး သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ Bunyan ကိုယ်တိုင် သည်လည်း အချိန်တိုင်း၏ နှစ်ခြင်းစာရေးဆရာပင်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးပုံနှိပ်သည့် ၁၆၇၈ တွင် Bunyan ၏စာအုပ်များသည် King James ကျမ်းစာအုပ်မှအပ အခြားအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များထက် ထုတ်လုပ်မှုများပြီး ရောင်းအားကောင်းမွန်သည်။ Spurgeon က ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို ၇၅ကြိမ်ထက်မနည်း ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ Spurgeon ၏တရားဒေသနာများတွင် ၄င်းအား ကိုးကား ခြင်း၊နှင့်ဥပမာပေးထားခြင်းကို မကြာခဏတွေ့ရှိရပါသည်။ ၄င်းမှာ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင် သောစာအုပ်ကလေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်မှာ Finney က ပြောင်းလဲခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည့် ဆယ့်ကိုးရာစုတိုင်အောင် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပရိုတဲ့ တင်းနှင့်နှစ်ခြင်းများယုံကြည်ထားသည့် ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
"မျှော်လင့်ချက်က ၄င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောသည်" ဟူသောအပိုင်းတွင် ကျွနု်ပ်တို့ သည် Finney ၏ "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ" ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ရှိသည့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို များစွာသင်ယူကြရသည်။
ဤအခန်းသည် သစ္စာရှိခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းတို့ကြား ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုဖြင့် အစပြု ထားပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်က လောက၏သုညဘဝ၊ လွဲမှားသောအသင်းတော်၊ လခ်ဗီဂဲစ်ကဲ့ သို့သွားလျက် လှည့်ဖြားခြင်း၊ ကြိမ်ဆိုခြင်းတို့ကို သူ့အားပြသသည့်အချိန်တွင် သူ၏ကယ်တင် ခြင်းကို သူသည် စတင်တွေးတောသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် သူက "ကျွနု်ပ်သည် အစ တွင် (သမ္မာကျမ်းစာ) အလင်းကိုဆန့်ကျင်လျက် မျက်စိပိတ်ခဲ့သည်" ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက် သူက ဤသို့ဆိုပါသည်။
"ပထမအနေဖြင့်-- ဤသည်မှာ ကျွနု်ပ်အပေါ်ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်ကို ကျွနု်ပ်ငြင်းဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်မှနိူးဆော်ခြင်းအား ဖြင့်အပြစ်သားများ၏ပြောင်းလဲခြင်းကို အစပြုမည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ မထင် မှတ်ခဲ့ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်--ကျွနု်ပ်၏အပြစ်သဘာဝတွင် အပြစ်တ ရားသည် အရမ်းပင်ချိုမြိန်လှပါသည်။ ထိုအရာကို ကျွနု်ပ်မစွန့်လွှတ်လိုပါ။ တတိယအချက်အနေဖြင့်-- ကျွနု်ပ်၏ပျောက်ဆုံးသောသူငယ်ချင်းများကို မည် သို့လက်မြှောက်အရှုံးပေးရမည်ကို ကျွနု်ပ်မသိပါ။ အကြောင်းမှာ သူတို့၏ ပါဝင်ခြင်းသည် ကျွနု်ပ်၏လိုလားတောင့်တမှုဖြစ်သည်။ စတုတ္ထအချက်-- ကျွနု်ပ်သိမြင်သည်ဟု ခံစားရသည့်အချိန်မှာ ကျွနု်ပ်ခံနိူင်ရည်မရှိသည့် ဒုက္ခ ရောက်သည့်အချိန်နှင့်စိတ်နှလုံးသားတွင် တိုက်ခိုက်နေရသည့်အချိန်ဖြစ် သည်။"
ခရစ်ယာန်က "သင်၏ဒုက္ခကို တခါတရံအကျိုးခံစားရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်" ဟု ဆိုသည်။
"ဟုတ်ပါတယ်၊" မျှော်လင့်ချက်ကဆိုထားသည်။ "သို့သော် သွေးဆောင်ခြင်း သည် ကျွနု်ပ်စိတ်နှလုံးတွင် တဖန်ရောက်လာပြီး အရင်ထက် ကျွနု်ပ်သည် သာ၍ဆိုးလာလိမ့်မည်။"
မျှော်လင့်ချက်က သိရှိလာခြင်းသည် သူ့ထံသို့ပြန်လာပြီး သူ့ကို ဒုက္ခဖြစ်စေ မည် ဟုဆိုသည်။
ခရစ်ယာန်က "ထို့နောက် အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်သနည်း" ဟုဆိုပေ မည်။
မျှော်လင့်ချက်က "ကျွနု်ပ်ဘဝကို ဖာထေးဖိုးကြိုးစားတယ်" အပြစ်မလုပ်ဖို့ကြိုး စားတယ်၊ ကျွနု်ပ်ကျူးလွန်သောပြစ်မှုနှင့်သူငယ်ချက်များထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့ သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ အခြားကောင်းမုကုသိုလ်များလုပ် ဆောင်ခြင်းကိုအစပြုသည်" ဟုဆိုပါသည်။
ခရစ်ယာန်က "ထိုအရာက သင့်ကို ကူညီရဲ့လား" ဟုဆိုသည်။
မျှော်လင့်ချက်က "ခဏတာအတွက်တော့ဟုတ်ပါတယ်၊ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်သော်လည်း တဖန် ဒုက္ခထဲပြန်ရောက်ပါသည်" ဟုဆိုသည်။
ခရစ်ယာန်က "မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း" ဟုဆိုသည်။
မျှော်လင့်ချက်က "ကျွနု်ပ်၏ဖြောင့်မတ်သောပြုမူခြင်းအားလုံးသည် ညစ်ပေ သောအဝတ်များကဲ့သို့ပင် သတိသရရှိသောအခါနှင့် ပညတ်တရားကိုလေ့လာ ခြင်းအားဖြင့် အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ကြောင်းကို သတိရသော အချိန်တွင် ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ပြီး ပညတ်တရားများကို နာခံခြင်းအား ဖြင့် ကောင်းကင်သို့ရောက်မည်ဟု ကျွနု်ပ်၏အတွေးသည် မိုက်မဲကြောင်း သိ ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုအချိန်တွင် ပြီးပြည့်စုံနေသည့်တိုင် ကျွနု်ပ်၏အ ပြစ်ဟောင်းများသည် ဘုရားသခင်၏မှတ်တမ်းတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်မိသည်။ အပြစ်ဟောင်းများသည် ပယ်ရှားခြင်းမခံရလျှင် ကျွနု်ပ်ကို ဖျက်ဆီးနိူင်သည်။ ထို့အပြင် ထိုအပြစ်များကိုလည်း ကျွနု်ပ်ဖယ်ရှားနိူင်သည် ဟုလည်း ထင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် များစွာသောရုန်းကန်မှုများကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တွင် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာမတွေ့ရပေ။ ကျွနု်ပ်၏ စိတ်နှလုံးသည် အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် ကျွနု်ပ်အတွက် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေ သည်ဟု သတိပြုမိလာသည်။ သစ္စာတရားက ပြောပြသည်မှာ ကျွနု်ပ်သည် အပြစ်ကိုလုံးဝပြုခြင်းမရှိသောသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မရရှိလျှင် ကယ်တင် တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိူင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင် ထိုင်နေတော်မူကြောင်း ကျွနု်ပ်အားပြောဆိုခဲ့သည်။ သစ္စာရှိခြင်းက "လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သင့်ကိုယ် စားဒုက္ခခံတော်မူသောသူအားဖြင့် သင်သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရမည်" ဟုဆိုသည်။
ခရစ်ယာန်က "အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း" ဟုဆိုခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ချက်က "ကျွနု်ပ်သည် ထိုအရာကို ကန့်ကွက်သည်။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်ကို ကယ်တင်လိုမည်မဟုတ်ဟုထင်သည်" ဟုဆိုသည်။
"သစ္စာတရားက သင့်အား မည်သည့်အရာကိုပြောဆိုသနည်း။"
"ခမည်းတော်သည် သင့်အား သားတော်ကို ထင်ရှားစေပါသလား။"
"ပထမအကြိမ်၊ သို့မဟုတ် ဒုတိယအကြိမ်၊ သို့မဟုတ် တတိယအကြိမ်၊ သို့မ ဟုတ် စတုတ္ထအကြိမ်၊ သို့မဟုတ် ပဥ္စမအကြိမ်၊ သို့မဟုတ် ဆဌမအကြိမ် တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။"
"ကျွနု်ပ်အားပြောဆိုသမျှသည်မှန်ကန်ကြောင်း၊ ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မရှိလျှင် လောကတခွင်လုံးသည် ကျွနု်ပ်ကို ကယ်တင်နိူင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ်ကိုယ်ကို ဆင်ခြင်မိသည်မှာ ကျွနု်ပ်ရပ် တန့်လျှင် ကျွနု်ပ်သေနိူင်သည်။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်မှတပါး ကျွနု်ပ်သေနိူင်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်က သားတော်ကို ကျွနု်ပ်အားပြသည့်တိုင် အောင် ကျွနု်ပ်လုပ်ဆောင်မည်။"
"ယေရှုကို ကျွနု်ပ်ထံ မည်သို့ထင်ရှားစေသနည်း။"
"ကျွနု်ပ်ဇာတိမျက်စိဖြင့် သူ့ကို မမြင်နိူင်ပါ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်၏စိတ်နှလုံးမျက်စိ ဖြင့်မြင်နိူင်ပါသည်။ ဤအရာဖြစ်နိူင်သောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ တွင် ကျွနု်ပ်သည် အလွန်ပင် ဝမ်းနည်းမိပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုဝမ်းနည်းမှုမှာ ကျွနု်ပ်၏ကြီးမားသောအပြစ်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် အသက်ဝိညာဉ်များ ထာဝရဒုက္ခခံစားရာ ငရဲပြည်မှတပါး မျှော်လင့်စရာမရှိ တော့ပေ။ ရုတ်တရက်ပင် ကျွနု်ပ်သိခဲ့သည်မှာ ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ကျွနု်ပ်ကို ငုံကြည့်တော်မူပြီး သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပါ၊ ကယ်တင်တော်မူခြင် သို့ရောက်လိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်ကိုပြောနေသည်ကို သိခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်က သခင် ဘုရား၊ ကျွနု်ပ်သည် ကြီးမားသောအပြစ်ကို ကျူးလွန်သောသူဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ သူက 'ငါ့ကျေးဇူးသည် သင့်အဖို့လောက်ပေသည်' ဟုဆို သည်။ ထို့နောက် ကျွနု်ပ်က၊ သို့သော် သခင်ဘုရား ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ဟုမေးလိုက်သည်။ သူက 'ကျွနု်ပ်ထံသို့လာသောသူသည် မည် သည့်အချိန်တွင်မျှ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မည်မဟုတ်၊ ကျွနု်ပ်အားယုံကြည်သူ သည်အဘယ်အခါမျှ ငတ်မွတ်မည်မဟုတ်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တိုးဝင်ချဉ်းကပ် ခြင်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်ကို ငါကြားလိုက်သည်။ လာသော သူ ဟူသည်မှာ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီး သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် ထွက်ပြေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့နောက် မျက်ရည်များသည် ကျွနု်ပ်မျက်စိမှစီးထွက်လာပြီး ကျွနု်ပ်က 'သခင်ယေရှု၊ ကျွနု်ပ်ကဲ့သို့အပြစ်ကြီးသောသူကို လက်ခံပြီး ကယ်တင်နိူင်၏ လော' ဟုပြောလိုက်သည်။ သူက 'ငါ့ထံသို့လာသောသူရှိသမျှကို အလျှင်းမ ပယ်' ဟူသောသူ၏ စကားကို ကြားမိပါသည်။ သူက 'အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ရန် ယေရှုခရစ်သည် ဤလောကသို့ကြွလာသည်' ဟုဆိုသည်။ သူ သည် ကျွနု်ပ်တို့အားချစ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ အပြစ်များကို ဆေးကြောတော်မူသည်။ ကျွနု်ပ်သည် သူအထဲ၌ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုကြည့်မျှော်ရမည်အကြောင်း၊ ကျွနု်ပ်၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် အ သွေးတော်ကို မျှော်ကြည့်ရမည်အကြောင်း၊ ကျွနု်ပ်အပြစ်ကြွေးဆပ်ရန် လက် ၀ါးကပ်တိုင်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူကြောင်းကို ထိုအကြောင်း အရာထဲမှ ကျွနု်ပ်သိခဲ့ရပါသည်။ ယေရှုထံသို့ ကျွနု်ပ်လာသည်။ ကျွနု်ပ်မျက်စိ သည်မျက်ရည်နှင့်ပြည့်လျှံလျက်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်နှလုံးသားသည် ခရစ်တော်၊ ၄င်း၏လူများ၊နှင့်နည်းလမ်းများအတွက် မေတ္တာနှင့်ပြည့်လျှံနေသည်။ "
ခရစ်ယာန်က " ဤသည်မှာ သင့်အပေါ် အဘယ်အကျိူးရှိသနည်း" ဟုဆိုပါ သည်။
မျှော်လင့်ချက်က "လောကတခွင်လုံးသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်ပြီး အပြစ်စီရင် ခြင်းကို ခံထိုက်ကြောင်း ကျွနု်ပ်အားမြင်စေသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် သားတော်ယေရှုထံသို့လာသမျှသောသူများကို သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်စေနိူင် ကြောင်းကိုလည်း ကျွနု်ပ်အားသိမြင်စေသည်။ ကျွနု်ပ်၏ငြင်းဆန်မှုများအ တွက်ရှက်ကြောက်စေပြီး အရင်က ယေရှုခရစ်၏အလှအပနှင့်မေတ္တာအ ကြောင်းကို စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် မစဉ်းစားမိခဲ့ပါ။ သန့်ရှင်းသောအသက် တာနှင့်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်တော်အတွက်တစုံတရာကို အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ် ဆောင်ခြင်းကို နှစ်သက်စေပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသောသွေးဂါလန်ရှိခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုခရစ်အတွက် အား လုံးကို ယိုဖိတ်စေနိူင်ပါသည်" ဟုဆိုသည်။ (Dr. Hymers ရှင်းလင်းထား သည်။ ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှဖြစ်သည်။ L. Edward Hazelbaker မှ ပြန်လည် ပြုပြင်ထားသည်။ Bridge-Logos ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၉၈၊ စာ-၁၈၀-၁၈၆ ) .
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ John Bunyan ၏စကားလုံးများသည် ညစ်ပတ်ပြီးဆိုးသွင်း သည့် "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ" များက ကယ်တင်ခြင်းကို မှော်ဆန်သောလှည့်စားမှုတစ်ခုအဖြစ်အ သွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည့်တိုင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော စိတ်နှလုံးသားတို့အတွက် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာပင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤစကားလုံးများကို ထပ်တလဲလဲဖတ်ပြီး အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းဆီသို့ သွားလျက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှုထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်မည်အကြောင်း ကျွနု်ပ်ဆုမွန် ကောင်းတောင်းဆုပြုပါ၏။
ဤသည်မှာ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော လမ်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခ ရစ်ထံပါးသို့ရောက်နိူင်သောလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရာလမ်းဖြစ် သည်။ Mr. Griffith ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Dr. Cagan နှင့် Dr. Chan ကယ်တင်ခြင်းရသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းရသည့် နည်းလမ်း လည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရမည့် လမ်းလည်းဖြစ်သည်။
"အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တံခါးသည် အလွန်ကျဉ်း မြောင်းသည်ဖြစ်၍၊ တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။" (မဿဲ ရး ၁၄ )
ခမည်းတော်ဘုရား၊ ဤတရားဒေသနာကို ကြားနာ သို့မဟုတ် ဖတ်ရှုသောသူအချို့တို့ သည် နက်နက်နဲနဲသိလာကြမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏။ အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် လက် ၀ါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံပြီး အသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည့် သားတော် ယေရှုခရစ်ထံပါးသို ကိုယ်တော်တိုင် ဆွဲခေါ်ရန် ဆုတောင်းပါ၏။ နာမတော်၌ ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်…။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၂ပေ ၂း ၁၅-၂၂
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “မြဲတည်ကျောက်”၊
Augustus M. Toplady, ၁၇၄၀-၁၇၇၈ ရေးစပ်သည်။ )